N'agbanyeghị ihe software ị na-eji, ebe ọ maara na isi keyboard mkpirisi maa-eme ka ọ dị mfe iji na-azọpụta gị a otutu oge na usoro. VLC Media Player ọ dị iche iche. Karịsịa, ọ bụrụ na ị dị ka anyị na-amasị-eji keyboard karịa òké, ị ga-n'anya ndị a mkpirisi na anyị banyere ịkọrọ gị na nke a post. Eji ihe ndị a keyboards nwere ike n'ihi na n'aka tinye gị arụpụtaghị nakwa na n'otu oge ahụ mee ka ọ fun iji VLC on a ụbọchị ndabere.
Shortcut 1: Play / kwụsịtụ na iji Space Bar isi
Play na kwụsịtụ na-enweghị a doro anya na nnọọ isi ma abụọ nke kasị eji ọrụ na-eji VLC Media Player na otú VLC na-eme ka ọ dị mfe maka ya ọrụ kenyere ọrụ ndị a na nnukwu na kacha doro anya na ahụ igodo gị - na Space Bar . Ọ bụkwa eziokwu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ media Player kwa, Space Bar bụ ndabere igodo Play na kwụsịtụ ọrụ.
Shortcut 2: Toggling n'etiti Full ihuenyo na Ohere mode
Ka na-ekwu na ị na-niile setịpụrụ na ndị enyi gị na-ekiri ọkacha mmasị gị nkiri na dị nnọọ chọrọ ka ịgbanwee VLC ka Full ihuenyo mode, i kwesịghị na-achọ òké ọzọ, nanị pịa 'F' isi. Ọ ga-ekwe ka ị Toggle ka Full ihuenyo mode na VLC na nanị otu pịa.
Shortcut 3: Olee Gbanwee akụkụ ruru
Chọrọ ịgbanwe a dị iche iche obosara na ịdị elu n'ihi na gị video, mfe pịa 'A' isi. Ọ ga-ekwe ka ị na-agbalị si dị iche iche na predefined akụkụ oke na VLC Media Player ma si otú ekwe ka ị họrọ otu nke kasị mma n'ime ha. Nke a nwere ike ịzọpụta gị a otutu oge na hassle nke na-achọ site na menu nhọrọ nke interface.
Shortcut 4: Olee ịgbanwe Zoom Mode
Ọ bụ ọzọ dị mfe ka ịgbanwee n'etiti ndị dị iche iche mbugharị ụdịdị dị na VLC; nnọọ na ị ga pịa 'Z' isi ka ngwa ngwa mbugharị na na nke video ke window mode.
Shortcut 5: Olee otú iji ọsọ ọsọ ngwa - Alt + Left Arrow / Alt + Right Arrow
I nwere ike ikwu sekọnd ole na ole na video ịzụ nanị ịpị Alt isi tinyere ntụziaka isi / akụ isi na direction (backward /-atụ) na ị ga-achọ ikwu (nri maka na-atụ na-ekpe maka backward). Onye ọ bụla pịa ga ikwu 10 sekọnd gị video.
Shortcut 6: Olee otú iji ọsọ ọsọ Ọkara - Ctrl + Left Arrow / Ctrl + Right Arrow
Ka unu wee na ite egwú nkeji na video, nnọọ na ị ga-eji dochie Alt na Ctrl isi na otu shortcut ga ugbu a kwuo a nkeji kama 10 sekọnd gị video, oge ọ bụla ị pịa Nchikota.
Shortcut 7: Olee otú iji ọsọ ọsọ Long - Ctrl + Alt + Left Arrow / Ctrl + Alt + Right Arrow
Gịnị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ikwu ihe karịrị a nkeji ma ọ bụ 10 sekọnd gị video? Ọ dị mfe na-eme, dị nnọọ nwere iji Alt na Ctrl igodo ọnụ na Left / Right Arrow igodo egwú 5 nkeji ozugbo. Nke a bụkwa ihe kasị mma i nwere ike ime na shortcut igodo dị ka awụgharị karịrị 5 nkeji na otu ugboro, ị ga-eji na-achọ mmanya na interface.
Shortcut 8: Olee Dịkwuo ma ọ bụ ibelata Mpịakọta iji a shortcut - Ctrl + Up Arrow / Ctrl + Down Arrow
Amụba ma ọ bụ decreasing olu nke gị video bụkwa nanị ole na ole igodo efep ke VLC, nanị pịa Nchikota Ctrl isi na 'Up' ma ọ bụ 'Down' akụ isi n'ihi na ihe ndị ha chọrọ olu larịị. Nke a pụrụ ịbụ-enye aka karịsịa n'ihi na ndị na-adịghị enwe a laptọọpụ na anụ ahụ igodo maka olu akara.
Shortcut 9: Chọrọ ogbi ọkpụkpọ - pịa M
Ọ bụghị ọtụtụ na-ekwu na nke a, ọ bụ dị mfe dị ka ọ nwere ike inwe, pịa M isi na i nwere ike ogbi / un-ogbi gị video na oge obula.
Shortcut 10: Olee otú ka ịhazie Audio / Video mmetụta na VLC - CTRL + E
E nwere ọtụtụ mmetụta (ọdịyo na video) agba ọdịiche, equalizer wdg na nwere ike ị chọrọ ịgbanwe mgbe ị malitere na-akpọ gị ọdịyo ma ọ bụ video, na ihe niile ị chọrọ ime iji na-enweta mmetụta na ị chọrọ bụ pịa Ctrl isi tinyere E nke na-ewetara gị ka Audio / Video mmetụta window on VLC Media Player. Ugbu a, ị pụrụ ime ka ndị chọrọ mgbanwe dị ka ị na-amasị.
Shortcut 11: Olee otú iji ego oge (Ịnọgide na gafeworonụ) - pịa T
N'adịghị ka ndị Ohere mode, mgbe na Full ihuenyo mode ị na-adịghị esi na-ahụ oge (fọdụrụ na gafeworonụ) ndabara, e nwere shortcut ezie ka i nweta ihe ọmụma a; nanị see T igodo gị keyboard ikuru 3-abụọ Ama n'elu nri n'akụkụ aka nke Full ihuenyo mode.
Shortcut 12: Olee otú iji Play Faster / Jiri Nwayọọ - pịa + ma ọ bụ -
Ị chọrọ na-agba ọsọ video na Fast ma ọ bụ jiri mode na bụ abawanye ma ọ bụ ibelata ọsọ nke gị video playback, mfe pịa + ma ọ bụ - isi ntọt ma ọ bụ ibelata ya.
Shortcut 13: Olee otú ka ịgbanwee gaa na ọzọ ma ọ bụ gara aga ihe na playlist - pịa N ma ọ bụ P
Na-egwuri egwu multiple ihe site a playlist? Chọrọ ikwu site na otu ihe ka onye ọzọ? Ị nwere ike nweta a nanị site na ịpị N (n'ihi na egwu na-akpọ ọzọ ihe) ma ọ bụ P (n'ihi na egwu na-akpọ ndị gara aga item) igodo.
Shortcut 14: Olee otú iji kwụsị playback - pịa S
Mfe, ma ọ bụghị ọtụtụ n'ime anyị maara na ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwụsị video a na-egwuri n'ihi ihe ọ bụla, ihe niile ị na chọrọ ime bụ pịa S isi na ọ ga-kwụsị video ozugbo na VLC Media Player.
Shortcut 15: Olee otú iji zoo ma ọ bụ Unhide Controls - Ctrl + H
Ndị a mkpirisi ga-ekwe ka ị ịchịkwa VLC fọrọ nke nta n'ụzọ zuru ezu na-enweghị adabere na GUI mgbe niile. The n'elu shortcut igodo pụrụ n'ezie ime ka iji VLC a fun ahụmahụ.
> Resource> VLC> 15 VLC mkpirisi i nwere mara!